शरीरका यी अंगहरुमा परफ्युमको प्रयोग खतरनाक ! | Makalukhabar.com
फागुन २७, काठमाडौँ । आजभोलि परफ्युमको प्रयोग साधारण भइसक्यो । शरीर तथा कपडाबाट आउने दुर्गन्ध कम गर्नका लागि घर बाहिर निस्कनुअघि अधिकांशले यसको प्रयोग गर्छन् ।
महिलाहरु कपडा र गहनामा परफ्युम लगाउने गर्छन् । तर, परफ्युमको प्रयोगले कपडा र गहनामा खराबी आउँछ ।
कहिल्यैपनि सीधा काखीमूनी परफ्युमको प्रयोग गर्नुहुँदैन । शरीरको संवेदनशील भाग मध्ये काखीमूनीको भाग पनि संवेदनशील हुने भएकाले परफ्युमको प्रयोगले चिलाउने र पोल्ने समस्या उत्पन्न हुनसक्छ । एजेन्सी
पारसलाई भेटेपछी खुशी भईन् मुस्कान
असोज २९, काठमाडौँ । एसिड आक्रमणमा परेर उपचाररत रहेकी मुस्कान खातुनलाई नेपाली क्रिकेटर पारस खड्काले कीर्तिपुर अस्पतालमा पुगेर भेटेका छन् । पारसलाई भेटेपछी मुस्कानको मुहारमा खुशी थपिएको तस्विरमा प्रष्ट देख्न सकिन्छ । पारसले आफूले मुस्कानलाई भेटेको सामाजिक संजाल ट्विटर मार्फत एक पोष्ट गर्दै जानकारी गरा... जारी राख्नुहोस...
असाेज २९ । सम्बन्धको कोमल धागो मनसित जोडिएको हुन्छ । जब सम्बन्ध टुट्छ तब सीधा प्रभाव मनमा पर्छ । हामी सबैजना आफ्नो सम्बन्धबाट केही अपेक्षा र आशा राख्छौं । जब यी आशा–अपेक्षा टुट्छन् तब पीडा हुन्छ ।सम्बन्ध जोड्नुभन्दा त्यसलाई जोगाइराख्न निकै गार्हो हुने गर्छ । पछिल्लो समय सम्बन्धलाई टिकाइराख्न पनि निक... जारी राख्नुहोस...
चार तला माथिबाट खसेका देवलाई नोबेलले बचायो
असोज २७, बिराटनगर । चार तला माथिबाट खसेर मरणासन्न अवस्थामा पुगेका धरानका देव विकलाई परिवारका सदस्यले बचाउँन सक्ने आश मारिसकेका थिए । शरीरका बिभिन्न भागमा गंभीर चोट लाग्नुका साथै मृगौलासमेत छेडिएर बाहिर निस्किएर २४ वर्षीय विकको अवस्था चिन्ताजनक बनेको थियो । रक्ताम्य अवस्थामा रहेका उनलाई उद्धार गरेर ध... जारी राख्नुहोस...
चार तला माथिबाट खसेका विकलाई नोबेलले बचायो (भिडियाे रिपाेर्ट सहित)
असाेज २८, बिराटनगर । चार तला माथिबाट खसेर मरणासन्न अवस्थामा पुगेका धरानका देव विकलाई परिवारका सदस्यले बचाउँन सक्ने आश मारिसकेका थिए । शरीरका बिभिन्न भागमा गंभीर चोट लाग्नुका साथै मृगौलासमेत छेडिएर बाहिर निश्किदा २४ बर्षीय विकको अवस्था चिन्ताजनक थियो । रक्ताम्य अवस्थामा रहेका उनलाई उद्धार गरेर धरान स... जारी राख्नुहोस...
डिन अग्रवालमाथि कालोमोसो दल्ने विजय थापाले प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गर्दै
काठमाडौं, २८ असोज । शैक्षिक अभियन्ता विजय थापाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र (डिन) कार्यालयका डिन डा. जगदिश अग्रवालमाथि कालो मोसो दलेको घट्नाको सम्पूर्ण जिम्मा आफूले लिने बताउँदै आजै प्रहरी प्रशासनमा आत्मसमर्पण गर्ने घोषणा गरेका छन् । मंगलबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै थापाल... जारी राख्नुहोस...
यी घरेलु उपायबाट यसरी ग्यास्ट्रिककाे समस्याबाट छुटकारा पाउँनुस्
असाेज २८ । पेट दुख्ने, पोल्ने, अम्लपित्त बढ्ने लगायतका लक्षणलाई नै ग्यास्ट्रिक भन्ने गरिन्छ । खानपिनको समय नमिल्नु, अमिलो पिरो चिल्लो खानेकुरा खानु लगायत धेरै कारणले ग्यास्ट्रिक हुने गरेको छ ।ग्यास्ट्रिक भएकाहरूलाई वाकवाकी लाग्ने, वान्ता हुने, ढ्याउ ढ्याउ आउनु, वान्तामा रगत देखिने, कालो दिसा आउने, ख... जारी राख्नुहोस...
गोलभेँडा खानुस, शुक्रकीटको गुण बढाउन सघाउँछ
असोज २८, एजेन्सी । गोलभेँडामा पाइने लाइकपीन नामक पोषक तत्त्वले पुरुषमा शुक्रकीटको गुण बढाउने एउटा अनुसन्धानले देखाएको छ। प्रत्येक दिन गोलभेँडाको दुई चम्चा गाढा लेदो ९प्युरी० सेवन गर्ने स्वस्थ पुरुषमा गुणात्मक रूपमा राम्रो शुक्रकीट बनेको पाइएको छ।सन्तान जन्माउन नसक्ने दम्पतीमध्ये आधाजसोमा पुरुषमा बाँ... जारी राख्नुहोस...
नेपालमै पहिलो पटक मेडिसिटी अस्पतालमा गरियो थेराप्युटिक प्लाज्मा एक्सचेञ्ज
असोज २७, ललितपुर । आधुनिक पद्धतिबाट शरिरको प्राणघातक एन्टिबडि (आफ्नो शरीरलाइ घात गर्ने तत्व) निकाल्ने थेराप्युटिक प्लाज्मा एक्सचेञ्ज प्रक्रिया नेपालमै पहिलो पटक एक ३३ वर्षिय पुरुष बिरामीमा सम्भव भएको छ । नेपाल मेडिसिटी अस्पतालको आइसियुमा सोमबार यो प्रक्रिया मृगौला, मुटु र फोक्सोमा समस्या देखिएका बिर... जारी राख्नुहोस...